Bahrain: Mihetsiketsika Samirery Ravehivavy! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2012 7:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Magyar, Português, বাংলা, Ελληνικά, اردو, Deutsch, 한국어, русский, Aymara, Español, македонски, عربي, English
Hatramin'ny niandohan'ny fitroarana manerana ny tontolo Arabo, efa lasa mahazatra antsika ny mahita sarin'olona an'arivony manao fihetsiketsehana eny an-kianja na eny an'arabe.
Nampidirina tao amin'ny rakibolana ny fehezanteny toy ny hoe Million Man March ( Diaben'ny Lehilahy An-tapitrasany, ary nanjary mariky ny “Lohataona Arabo” ny sary tahaka ity ambany ity.
Hetsi-panoherana goavana tao amin'ny kianjan'i Tahrir, ao Kaire, sary avy amin'i Nameer Galal (25/11/2011). Copyright Demotix.
Na izany aza, ilaina ny herimpo lehibe raha anatinà fihetsiketsehana kely [vitsy olona], izay vitsy ny olona manohana sy fahalalam-baovao mitatitra izay mety ho fifandonana. Ahoana ny amin'ny mpanao fihetsiketsehana tokana midina an-dalambe irery, tahaka ity sary ity?
Zainab Alkhawaja ao ivelan'ny Tsenam-bola Harbor ao Manama, Bahrain (21/4/2012). Sary avy amin'ny mpisera Twitter @Kareemasaeed.
Zainab Alkhawaja ity hita amin'ny sary ambony ity izay nanao fihetsiketsehana irery tao ivelan'ny Tranom-bola Harbor ao Manama, renivohitr'i Bahrain tamin'ny 21 Aprily lasa teo. Mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona fanta-daza ny rainy, Abdulhadi Alkhawaja, izay nosamborina tamin'ny 9 April 2011 ary voasazy higadra an-tranomaizina mandra-pahafaty roa volana taty aoriana, miaraka amin'ny mpitarika mpanohitra hafa. Nitokona tsy nihinan-kanina izy nanomboka tamin'ny 8 Febroary 2012 mba hanao fanairana noho ny fanagadrana sy ny fampijaliana iaretany, ary vao haingana koa no naneho ny ahiahiny ny mpiserasera manerana izao tontolo izao mikasika ny faharatsian'ny toe-pahasalamany.
Notazomina nanomboka tamin'ny 20 Aprily teo i Zainab, mpisiokantserasera amin'ny anarana hoe @angryarabiya. Nanambara ny rahavaviny Maryam AlKhawaja fa nandà tsy handeha ho any fampanoavana izy. Tsara ny manamarika fa tsy vao voalohany no nosamborina toy izao i Zainab, ary tsy vao voalohany ihany koa no nanao fihetsiketsehana irery tahaka izao izy.
Mbola manontany tena foana aho ny amin'ny herim-po ananany toy izao, kanefa fantatro fa tsy misy mahavaly tsara ny fanontaniako ankoatra ilay nosoratany tao amin'ny Twitter-ny:
Raha any am-ponja ianao, miaina tsy misy fanajana sy anaty fijaliana, manompo ny mpanao didy jadona mpamono olona, ny fanadinoina ny tahotra ao anatintsika no dingana voalohany atao & mahafantatra fa zontsika ny.. ho tezitra.
1 andro izayArabia Saodita